VidOlink Reacher: VidOvation's Newest Broadcast-Grade HDMI Ma HD | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Home » Apụta » VidOlink Reacher: VidOvation's Newest Broadcast-Grade HDMI Na HD
Ọ bụrụ na enwere ebe ịchọta teknụzụ dị elu maka ndị na-agbasa ozi, ọ bụ ya VidOvation. N’ime nanị ihe ndekọ afọ iri, ụlọ ọrụ ahụ achọpụtala na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-aga nke ọma ma na-arụ ọrụ nke ọma, nke a sitere n’ikike o nyere ndị na-agbasa ozi na vidiyo, ọdịyo, na ntanetị mgbasa ozi, ntinye na sistemụ nyere ikike maka ha. iji mee ka ọdịnaya ha dịkwuo mma yana ikike izipụ ha maka ndị na-ege ntị.
N'ime afọ iri kemgbe a malitere ya, VidOvation enweela ihe ịga nke ọma dị ka onye na-eweta teknụzụ kachasị elu na usoro ihe ntinye nke vidiyo, ọdịyo, na data, ntinye, na usoro nkesa maka telivishọn mgbasa ozi, egwuregwu, mmepụta, AV ụlọ ọrụ, na ahịa gọọmentị. Companylọ ọrụ ahụ egosiputara mmepụta ime ime ụlọ na-ebi n'ime ụlọ ma ọ bụ REMI n'enweghị usoro-izizi ziri ezi yana idochi egbugbere ọnụ gafee ọtụtụ igwefoto. Companylọ ọrụ ahụ na - echekwa irube isi n'iwu n'ụlọ ọrụ onye ọrụ IPTV yana sistemụ dijitalụ yana Veramatrix DRM akwadoro na izo ya ezo.
VidOvation enyocha ekwentị, igwe na-enweghị eriri, vidiyo vidiyo, vidiyo karịrị IP, ngbanye ederede, nyocha IP, nlekota & ọtụtụ nyocha, ụlọ ọrụ IPTV, Verimatrix & Pro: Idiom digital rights management (DRM) & izo ya ezo, akara dijitalụ, na usoro nkwukọrịta fiber-optic. Ngwọta nke ụlọ ọrụ ahụ na-emezi mgbasa vidiyo site na mwepụ nke ekwekọghị ekwekọ dị ka ọnwụ mgbaàmà, enweghị oge, nnyonye anya, mkpọtụ, na nsogbu nchekwa.
Nke VidOvation Ọrụ ndị ahịa dị ala dị ike ya iji nyere ndị ahịa aka ịbanye agbanwe agbanwe na akụrụngwa ndị dị adị. Companylọ ọrụ ahụ na-esonye na usoro amamịghe ahụ zuru ezu - site na nyocha ọrụ na njikwa gaa injinịa na njikwa, na ikike na nkwado. Ọtụtụ n'ime Nke VidOvation ụdị gụnyere:
Brandị akara ndị a na ndị ọzọ na-emejupụta usoro nke ịga nke ọma VidOvation emeberela onwe ya, tinyere usoro nke ngwaahịa arụpụtara, nke gụnyere ya bụ ọkwa Kacha Ọhụụ HDMI na HD, na VidOlink Reacher.
Dika ọkwa ọkwa ohuru nke ụlọ ọrụ ahụ HDMI na HD Njikọ nnyefe vidiyo ikuku SDI, VidOlink Reacher nwere ike iru 3000 ụkwụ ahịrị nke anya na latency efu na enweghị mkpakọ. Onye na-ebugharị ya dị ezigbo nkọ ma dịkwa fechaa, nke na-eme ka ikike ịbanye na ya dị mma. Nke a na - eme ka ngalaba ahụ zuo oke maka inye aka na ntanetị, ntanetị na akụkọ mgbasa ozi, UAV, ndị agha, ụlọ ọrụ na ngwa ndị ọzọ nke sistemụ ikuku anaghị adịkarị ma ọ bụ na-adị oke ọnụ.
The VidOlink Reacher na-akwado mkpebi niile ruru 1080p60 ọ na - eji teknụzụ mgbasa vidiyo ikuku kachasị elu. Nke a na-ahapụ ka usoro ahụ nyefee 3G klas SDI na HDMI akara ngosi vidiyo dị elu na-ebugharị na enweghị mkpakọ na enweghị latency. Onye na-agụ ya nwere ihe na-ahọrọ ugboro ugboro na onye na-ebugharị ya na onye na-anabata ya, nke a na-enye ya ohere ịnye ndị ọrụ ohere opekata mpe 10 ga-arụ ọrụ, nke na-akwado ihe ruru 4 na-arụ ọrụ n'otu oge. Usoro ahụ gunyere ihe ntụgharị njem 1 / 4-20 nke ma onye na-ebugharị na onye na-anata ya.
Atụmatụ ndị ọzọ nke VidOlink Reacher -agụnye:
Nhọrọ Ike Nyefee (Kwadoro site na 4 pin Njikọ nwanyị Lemo. Sony chaja batrị dakọtara gụnyekwara)
Nhọrọ Ike Ike nnata (Kwadoro site na 4 pin Njikọ nwanyị Lemo. A na-etinye ike AC, yana nhọrọ batrị dị ka V-Lock, Anton Bauer Gold Mount ma ọ bụ Sony batrị F950 dakọtara)
Kit Gain Anten Gita dị elu maka ndị na-anata ya (nwere akụkụ isii, uru dị elu, otu antenna gburugburu nwere usoro anọ nwere oghere abụọ na-anọghị nha)
Muta ihe banyere VidOlink Reacher site na ịga vidovation.com/product/vidolink-reacher-1500-feet-zero-latency-hd-sdi-hdmi-nweghi njikọ-ab.
VidOvation N'agha Video
VidOvation Aghọtara na ọtụtụ azụmaahịa enweghị ihe ọmụma ma ọ bụ akụrụngwa anụ ahụ iji chepụta ma mejuputa usoro zuru oke nke dabara na mkpa ọrụ aka ha na mmefu ego ha. Inwe ihe omuma a na-enyere ulo oru aka inye ndi ahia aka ijikota uzo esi ahazi nke oma nke oma n’ime ihe ndi ozo.
Nke VidOvation nka na injinia kpuchie akụkụ niile nke vidiyo na nzipu data na nkesa. Companylọ ọrụ ahụ na ndị ọrụ ya dị ịtụnanya edewo ọtụtụ eBooks na Ntuziaka Onye Ọrụ na isiokwu ndị sitere na nkwukọrịta vidiyo ikuku, IPTV, vidiyo karịrị netwọ IP na Ethernet, vidiyo na-agagharị, ntanetị na ihe ndị ọzọ. Nke VidOvation nka gbabiri ngwa nke gụnyere imepụta igwefoto mgbakwunye ikuku mgbaru ọsọ na-enwe ike ijide ma dekọọ vidiyo dị ndụ nke akara mgbaru ọsọ maka ichikota ma nyeghachi nkwenye ozugbo maka NHL na Njikọ Hockey Russian. Na mgbakwunye na nke ahụ, ndị ọzọ VidOvation oru ngo esonye n’inye Las Vegas City Center ihe mmemme ile ọbịa zuru ụwa ọnụ maka mmezu vidiyo kachasị mma yana mkpebi ruru 1080p site na akụrụngwa eriri ọkụ. Na agbanyeghị ma oru ngo buru ibu ma ọ bụ obere, Nke VidOvation Amaghị injinị injinịa na ụlọ ọrụ maka ogo ọrụ ya na itinye uche ya na nkọwapụta, nke bụ ihe ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ga-enweta uru mgbe niile ka ọ na-aga n’ihu imeziwanye na ịgbasa ikike ha ikesa ọdịnaya n'ọtụtụ usoro mmepụta.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara VidOvation, gaa vidovation.com/
Audio Onye na-ahụ maka mgbasa ozi Igwe ahia mgbasa ozi ụlọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi telivishọn HDMI na HD SDI njikọ nnyefe vidiyo ikuku ndị mgbasa ozi ntinye na nkesa nkesa nnyefe data sistemụ akara ngosi dijitalụ mmeputa ime-ka-obibi n’ime ụlọ SoftAtHome, MStar, CES2017 Ụgha & Akụrụ Igwe TV Veramatrix DRM na izo ya ezo Video Ngosi Injinia video gụgharia VidOlink Reacher VidOvation 2020-04-30
Osote: Hitachi Kokusai weputara igwefoto ohuru ohuru 8K